सातौं महाद्वीप - 1aviagem.com
अघिल्लो पोष्ट: बार्सिलोनामा के गर्ने सल्लाह
अर्को पोस्ट: आठौं महाद्वीप
पोष्ट गरिएको 18 अगस्ट 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
यदि मैले तपाईंलाई भनें भने हाम्रो आफ्नै (मानव) मा पृथ्वीले सातौं महाद्वीप प्राप्त गर्यो भने?
हो, समाचार राम्रो लाग्दछ, तर दुर्भाग्यवस यो छैन।
समुद्रका धारहरूले समुद्रमा बग्ने फोहोरले गर्दा र क्यालिफोर्निया र हवाईको बीचमा प्रशान्त महासागरको केन्द्रमा केन्द्रित भएकोले केही समुद्र वैज्ञानिकहरूले यसलाई सातौं महाद्वीपको रूपमा वर्गीकृत गरेका थिए। यो फोहोरको थुप्रो हुन्छ जुन हामीले खारेज गर्छौं, प्राय: प्लास्टिकबाट बनेको। यो लगभग 79 हजार टन को अनुमान गरिएको थियो र 94% प्लास्टिक वा माइक्रो प्लास्टिक बाट बनेको थियो। माइक्रो-प्लास्टिकलाई सानो टुक्रा प्लास्टिकको रूपमा बुझ्नुहोस् जुन समुद्रबाट हटाउन गाह्रो छ। हामी ढकनी, भाँडाकुँडो र अन्य सामग्रीहरूका कुरा गर्छौं जुन भाँचिंदा समुद्री छालहरू, वा सटरको छेउमा वा सड्न सक्ने कुनै चरणमा कतै5मिलिमिटरको नजिक छ। यो तस्वीर जस्तो केहि।
(फ्लोरिडा सी ग्रान्टबाट फोटो)
र यो सामग्री समुद्रमा तैरन्छ र एकै साथ आउँदछ जबसम्म यसले केही अनुसन्धानकर्ताहरूले "नयाँ महाद्वीप" भनेको छैन। त्यो सहि हो, एक प्लास्टिक महाद्वीप। जसलाई म सातौं महाद्वीप भन्छु। " आज आज बाहेक: अफ्रिका, अमेरिका, अन्टार्कटिका, एशिया, युरोप र ओसिनिया, हामीसँग पनि प्लास्टिक छ!
नयाँ महाद्वीप के हुन्छ?
फेला परेका मुख्य सामग्रीहरू नाईलन धागोद्वारा जोडिने छ, माछा मार्ने गियर र कपडाबाट आउँछ, जो अन्ततः उनीहरूसँग धेरै अन्य सामग्रीहरूमा सामेल हुन्छ। सामग्रीमा सबै प्रकारका बोतलहरू समावेश छन्, पाल्तु जनावरदेखि लिएर गिलासका बोतलहरू, चश्मा, विभिन्न प्लास्टिकको भाँडा र उनीहरूका ढक्कनहरू सम्म। तिनीहरू प्रशान्त महासागरमा केन्द्रित हुँदै जान्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका (क्यालिफोर्निया) र हवाई बीच
ठीक छ, तपाईंले समुद्री जीवनको केही चित्र देख्नु भएको हुन सक्छ कि प्लास्टिक झर्नु वा बिग्रिएको छ। कछुवाहरू प्लास्टिकको झोलाले जिउँदो पानीलाई भ्रममा पारिरहेछन र खान र मर्दैछ किनकि उनीहरूले प्लास्टिकलाई हटाउन सक्दैनन र यसले कछुवालाई मार्दछ। हो, दुर्भाग्यवश यो हुन्छ।
र तपाईंले सोच्नु भन्दा पहिले कछुवाहरू जिउँदो पानीको साथ प्लास्टिक अलमल गर्न पर्याप्त मूर्ख छन्, यसलाई आफैं प्रयास गर्नुहोस्। समुद्रबाट जीवित, कारावल पानी हेर्नुहोस्, जसमा पहिल्यै बादल लागेको पानी र दृश्यता बिगार्न सक्छ, र जीवित पानी हेर्नुहोस्, वा उही शर्तहरूमा कारावल। यदि तपाईंले भिन्नता देख्न सक्नुहुन्छ भने यो हो?
त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन सजावटको प्लास्टिकको फललाई वास्तविक फलबाट छुट्याउन थाहा छैन।
(त्यसोभए माथिका दुई फोटोमध्ये कुन प्लास्टिकको फल हो र कुनचाहिं वास्तविक फल हो?) यसलाई टिप्पणीमा छोड्नुहोस् (फोटो 1 वा फोटो 2)।
र अब, के तपाईंले कछुवाहरू त्यति मूर्ख हुनुहुन्न भनेर बुझ्नुभयो?
ठिक छ, यसलाई प्लास्टिक टापु वा सातौं महाद्वीप भन्नुहोस् तथ्य यो छ कि समस्या अवस्थित छ र यसको सामना गर्न आवश्यक छ। आखिर, यदि जनावरहरूले प्लास्टिकमा भोजन गरिरहेका छन्, र यसले खाना चेनको साथ बिगार्दैन भने, अनुमान गर्नुहोस् यो कहाँ केन्द्रित हुनेछ? तिम्रो वा मेरो पेटमा। जे भए पनि हामी खाना श्रृ of्खलाको शीर्ष छौं। र हामी समुद्री जनावरहरू लगायत जनावरहरूलाई खुवाउँछौं।
नयाँ अनुसन्धानले देखाउँदै छ कि तथाकथित "सातौं महाद्वीप" फ्रान्सको क्षेत्र वा मीनास गेराइस राज्य (मेरो ब्राजीलका साथीहरूको लागि) दुई वा तीन गुणा ठूलो आकारको हुनेछ। केहि 1,6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, र यो बढिरहन्छ।
यस प्लास्टिक पुट्टीको लागि आधिकारिक नाम हो: प्रशान्त फोहोरको ठूलो अंश।
माइक्रो प्लास्टिकको कारण कुन पत्ता लगाउन गाह्रो छ (5 मिमी सम्झना छ?)
त्यसोभए यदि तपाईं रिसाइकल गर्नुभयो भने, पानी र अन्य प्लास्टिकका सामानहरू बोतल उचित ठाउँमा फाल्नुहोस् र समुद्र तटमा होइन, वा कम्तिमा यसलाई उचित गन्तव्य दिनुहोस्। यो गर्नाले समुद्री जीवन बचाउन मद्दत गर्दछ।
जोआना बिचलहोको वाक्यांश याद गर्नुहोस्:
"तपाईं कहिले बाहिर खेल्नुहुन्न, तपाईं मात्र भित्र खेल्नुहुन्छ!"
यो मेरो प्रिय छ, तपाईं कहिले खेल्नुहुन्न (ग्रह) तपाईं बस भित्र प्ले गर्नुहोस्।
कृतज्ञताका रूपमा, म तपाईं को बारे मा सचेत हुनको लागि एक कछुए छोड्दछु। उनले तपाईलाई इशाराको लागि धन्यवाद पठाउँछन् कि (वा कुनै पनि हिसाबले समुन्द्रमा अन्त्य हुन्छ) प्लास्टिक, तर फेरि प्रयोग, रीसायकल वा सही गन्तव्यमा पठाउन।
मलेशियामा टर्टल शट।
ठीक छ, अर्को पोस्टमा म आठौं महाद्वीपको बारेमा कुरा गर्नेछु, र यो तपाईंको सोच्ने भन्दा तपाईंको नजिक छ!
समुद्री जीवन भ्रमणको बारेमा बढि जान्नको लागि:
र महासागरको भाग खोज्नुहोस्।
यसको बारेमा अधिक पढ्न, म दुई लि links्क छोड्दछु।
1- नेशनल जियोग्राफिक द्वारा
https://www.Nationalgeographic.com/news/2018 / 03 / महान-प्रशांत-कचरा-प्याच-प्लास्टिक - वातावरण / #नजिक
2- दैनिक टेलीग्राफबाट।
https://www.dailytelegraph.com.au/ न्यूजलोक / उत्तरी-समुद्री तट / उत्तरी-समुद्र तट-काउन्सिल-टु-विचार-प्लास्टिक-झोला-प्रतिबन्ध-पार-द-प्रायद्वीप /समाचार कथा /5dcabe2f20d33b1e1104dea4a080daea
आलिंगन र अर्को पोस्ट सम्म।